Usuku lwe-Debian 2021: Ngabe i-Debian 11 Bullseye ikhishwe nge-Debian Day? | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 15/08/2021 00:11 | Kubuyekezwe ku- 15/08/2021 00:34 | Ukusatshalaliswa, Izaziso
Izolo, 14 Agasti 2021, kwakungenxa yabathandi abaningi be- Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux emhlabeni wonke, usuku olukhetheke kakhulu futhi olulindelwe isikhathi eside. Lowo unyaka nonyaka waziwa njenge Usuku lwe-Debian noma i "Usuku lwe-Debian GNU / Linux".
Ngaphezu kwakho konke, ngoba kulokhu Usuku lweDebian 2021 abaningi balindele isimemezelo sokukhishwa kokugcina kwenguqulo yokuqala ezinzile ye "I-Debian 11 Bullseye". Futhi yebo, izolo cishe ekugcineni kosuku, inguqulo ebilindelwe ikhishwe futhi ama-ISO ayo atholakala esigabeni esivamile se- Iphrojekthi ye-Debian. Ngakho-ke: Sesivele sinayo "I-Debian 11 Bullseye" ukuzama, ukusebenzisa nokujabulela!
Ngaphezu kwalokho, sizokwabelana ngezindaba zakamuva ezihlobene nokushiwo usuku lokugubha y ukukhishwa kwenguqulo entsha.
Kepha ngaphambi kokungena ezindabeni ezinjalo ezihlobene ne- Usuku lweDebian 2021 kwaqala 14 / 08 / 2021, njengenjwayelo sizoshiya ngokushesha isixhumanisi se- okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene con "I-Debian 11 Bullseye" lapho besivele sishilo ukuthi kungenzeka yini usuku lokugcina lokukhishwa. Ukuze, uma kunesidingo, bakwazi ukuyifunda kalula ekugcineni kokufunda le ncwadi:
"Ngokusho imininingwane esemthethweni ku-Wiki we Inhlangano ye-Debian, lo nyaka unyaka ka- "I-Debian 11 Bullseye", ngoba, lezi yizinto ezibalulekile ekuthuthukisweni nasekukhishweni kwale nguqulo eshiwo:
14-08-2021: Usuku lokugcina lokukhululwa."
1 Usuku lwe-Debian 2021: Yini okusha kwe-Debian GNU / Linux Day 2021
1.1 Ngabe i-Debian 11 Bullseye isivele ikhishwe nge-Debian Day 2021?
1.2 Imininingwane yokugubha usuku lwe-Debian 2021
1.3 Izindaba eziqabulayo mayelana nokukhululwa kweDebian 11 Bullseye
1.4 Imininingwane esemthethweni, izindaba nezibuyekezo ezisemthethweni ku-Debian GNU / Linux
Usuku lwe-Debian 2021: Yini okusha kwe-Debian GNU / Linux Day 2021
Ngabe i-Debian 11 Bullseye isivele ikhishwe nge-Debian Day 2021?
Yebo, izolo ngomhlaka 14/08 kucishe kwaphela usuku akhululwa ngalo. Njengoba kushiwo ezincwadini zakamuva ezitholakala izolo, kuwebhusayithi ye Micro-izindaba ezivela ku-Debian Project futhi njengoba kungaqinisekiswa ne Ama-ISO ayatholakala ngokulandelayo isixhumanisi.
Imininingwane yokugubha usuku lwe-Debian 2021
El Usuku lwe-Debian kwamenyezelwa ngokusemthethweni i 14 / 08 / 2021, kodwa empeleni unyaka ngamunye kugujwa ngezinsuku eziningana eziseduze ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba, njengoba ubona kokulandelayo isixhumanisi.
El Usuku lwe-Debian empeleni njalo ngo-Agasti 16 unyaka ngamunye, usuku i- Iphrojekthi ye-Debian. Njengoba usuku kwakungu- 16 / 08 / 1993, njengoba kushiwo kokulandelayo isixhumanisi.
Yonke inguqulo entsha ezinzile ye- "I-Debian 11 Bullseye" izokhishwa kuphela lapho kungasatholakali amaphutha. Iphuzu elifinyelelwe izolo kusihlwa, njengoba kuqoshwe kokulandelayo isixhumanisi.
Izindaba eziqabulayo mayelana nokukhululwa kweDebian 11 Bullseye
23:40 – 14/08/2021Kukhululwe iDebian 11 Bullseye: Hlola izindaba
23:31 – 14/08/2021: Endabeni kaDebian 11 Bullseye, indawo yokuphepha ibizwa kabusha ngokuthi yi-bullseye-security, ngakho-ke abasebenzisi bazodinga ukuguqula amafayela abo wohlu lomthombo we-APT nezilungiselelo ngokufanele lapho benza ngcono. Hlola izindaba
23:14 – 14/08/2021: Uma ngabe uhlelo lwakho luyi-Debian 9 (Stretch) noma ngaphambili, sicela ulandele imiyalo ku Amanothi wokukhishwa kwe-Debian 10 ukuthuthukela ku-Debian 10 (Buster) kuqala bese ungathuthukela ku-Debian 11 Bullseye. Hlola izindaba
23:08 – 14/08/2021: I-Debian 11 Bullseye idlulela ezitolo zokugcina eziseduze nawe! Uma ungakwazi ukulinda isikhathi eside, izithombe ze-CD sezitholakala kokulandelayo isixhumanisi. Hlola izindaba
Imininingwane esemthethweni, izindaba nezibuyekezo ezisemthethweni ku-Debian GNU / Linux
Ukuze ube sesikhathini se- Iphrojekthi ye-Debian izixhumanisi ezilandelayo zingahlolwa njalo:
Iwebhusayithi esemthethweni yeDEBIAN Project
I-Blog esemthethweni Amabhithi avela ku-DEBIAN
Insizakalo yezindaba ezincane: Ama-Micronews
Uhlu lokumenyezelwa kwe-Debian
Uhlu lokumenyezelwa kwe-Debian-security
Uhlu lwezindaba ze-Debian
Ngamafuphi, lokhu Usuku lweDebian 2021 inguqulo entsha ebilindelwe isikhathi eside ye Iphrojekthi ye-Debianucingo "I-Debian 11 Bullseye" Futhi kusala kuphela abasebenzisi bayo abanentshisekelo nezinhlangano ezinentshisekelo zokuyilanda ukuze bayivivinye, bayisebenzise futhi bajabulele noma babeke amazwana kuyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Usuku lwe-Debian 2021: Ngabe i-Debian 11 Bullseye ikhishwe nge-Debian Day?